Xaliimo Yareey” wax muddo korarsi ah oo ay damacsanyihiin madaxda Qaranka ma ogi” – Kalfadhi
Xaliimo Yareey” wax muddo korarsi ah oo ay damacsanyihiin madaxda Qaranka ma ogi”
Waxaa socda kulanka Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo su’aalo waydiinaya Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey).
Xaliimo Yareey ayaa la waydiiyay su’aalo ay kamid aheyd rajada laga qabo in dalka ay ka dhacdo doorasho Madaxweyne oo ah qof iyo cod iyadoo aan wali la sameynin Sharciga doorashooyinka Qaranka.
“Diyaarinta Sharciga doorashooyinka Qaranka ma ahan wax quseeyo Guddiga doorashooyinka ee barnaamij hoos yimaada Wasaaradda arimaha Gudaha” ayey tiri Xaliimo Yareey oo la weydiiyay su’aal Sharciga doorashooyinka ku saabsaneed.
Xaliimo Ismaaciil Ibraahim ayaa sheegtay in aysan waxba ka ogeyn wararka sheegaya in muddo ay korarsi ay sameysan doonaan madaxda Qaranka ayna tahay in iyaga wax laga waydiiyo su’aalaha arintaasi quseeya.
“Waxba kama ogi arimaha aad i weydiiseen ee muddo Korarsiga waa fiicnaan lahayd in madaxda ay quseyso la waydiiyo” ayey uga jawaabtay su’aal araintaasi laga waydiiyay.
“Soomaaliya waligeed kama dhici doonto doorasho qof iyo cod ah, hadii aan la helin Sharciga doorashooyinka Qaranka” ayey ka sheegtay Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhinaca Kale Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi ayaa nasiib darro wayn ku tilmaamay in ilaa hadda aysan Dowladda Soomaaliya ku guulaysan sameynta Sharciga doorashooyinka Qaranka waqtigana uu gabogabo ayahay.
Dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashada ayuu sheegay in ay Mas’uul ka tahay Xukuumadda Soomaaliya isagoo dhanka kale sheegay in ay madaxda Dowladda Soomaaliya raadinayaan muddo korarsi maadaama aysan xoogga saarin Sharciga doorashooyinka Qaranka.
“Waxaa nasiib darro ah in Xilligaan oo aan ognahay waxa ka haray doorashada Qaranka aysan Xukuumadda sameynin Sharciga doorashooyinka” ayuu yiri Xildhibaan Axmed Macalim Fiqi oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada Aqalka Sare oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho
Muxuu Dastuurka ka qabaa Banaanbaxyada iyo kulamada dadweynaha?